यो गर्भावस्था को समयमा खतरनाक रक्तस्राव छ?
यो गर्भावस्था कुनै पनि महिला को जीवन मा सबै भन्दा सुन्दर र आकर्षक अवधि मध्ये एक छ भन्ने तथ्यलाई तर्क गर्न कठिन छ। तर, हामी यो अवधि पनि मुख्यतया आफ्नो स्वास्थ्य स्थितिको बारेमा, अनुभव र चिन्ता धेरै संग सम्बन्धित छ भन्ने सम्झना गर्नुपर्छ। आखिर, हाम्रो शरीर आवश्यक हामीलाई गर्भावस्था सम्बन्धित कुनै पनि समस्या बारेमा बताउनुहोस्। निश्चित जस्तै संकेत लागि लायक विचार सर्वश्रेष्ठ रूपमा एक पटक फेरि आफ्नो स्वास्थ्य र बच्चालाई स्वास्थ्य हानी भन्दा एक डाक्टर हेर्नुहोस्। यी संकेत को एक, गलत वर्तमान संकेत, गर्भावस्था को समयमा आक्रान्त छ।
धेरै अक्सर आक्रान्त गर्भावस्था मा पहिलो trimester (महिलाहरु को 20%) मा हुन्छ। यो अक्सर कुनै पनि स्वास्थ्य प्रभाव बिना यसको आफ्नै मा हल। अक्सर तथापि, र अवस्थामा जहाँ यस्तो रक्तस्राव गर्भपात मा समाप्त हुन्छ। त्यसैले, पहिलो trimester मा एक महिला थिए भने spotting, नआत्तिनुहोस्, तर एक डाक्टर अवश्य छ हेर्न। तपाईंको आतंक नकारात्मक नजन्मेको बच्चाको असर गर्नेछ किनभने परीक्षा पछि, डाक्टर तपाईं अस्पताल राख्न निर्णय भने,, चिन्ता छैन। सायद स्त्रीरोग विशेषज्ञ बस विस्तृत परीक्षा आवश्यक छ।
प्रारम्भिक गर्भावस्था मा आक्रान्त हर्मोन कमी, को गर्भाशय को घाँटी मा सुनिंनु, र एक अस्थानिक गर्भावस्था कारण हुन सक्छ। यसबाहेक, रक्तस्राव को कारण किनभने योनी mucosa वा ग्रीवा दाह गर्न क्षति को यौन कार्य बन्न सक्छ। गर्भावस्था को समयमा यस्तो रक्तस्राव आमा वा बच्चा या त को लागि खतरनाक छैन।
तर, अन्य छन्, कहीं अधिक गम्भीर, आक्रान्त हुन्छ।
1 गर्भपतन। रक्तस्राव साथै पेट दुखाइ cramping द्वारा विशेषता छ। समय मा एक डाक्टर हेर्न भने, गर्भावस्था अक्सर सुरक्षित गर्न सक्नुहुन्छ। जब गर्भपात को खतरा पालन गर्न आवश्यक छ , ओछ्यानमा आराम तनावपूर्ण अवस्थामा जोगिन, पूर्ण आराम को एक राज्य मा हुन।
2. द सिस्टिक स्किड। यो राज्य, placental ऊतक को विकास सँगसँगै छ जो। यो profuse पीडारहित रक्तस्राव द्वारा विशेषता छ। यो scraping र हर्मोन स्थिति को अर्ध-वार्षिक अनुगमन आवश्यक छ।
3. Chromosomal असामान्यताहरु। दुर्भाग्यवश, यो मामला मा, गर्भावस्था छैन, यो समाप्त सुरक्षित गर्न सकिन्छ गर्भपात। कि पछि, एक महिला, को गर्भाशय को curettage गर्न साथै गर्भपात को कारण स्थापित गर्न आवश्यक छ।
साथै, गर्भावस्था को समयमा आक्रान्त यो uterine गुहा बाहिर हुन्छ भने छ, अस्थानिक गर्भावस्था, हुन सक्छ। यसको कारण पनि fallopian ट्यूब को बाधा छ। यो अवस्था एक पाइप हटाउन र पेट गुहा धोइदिनुभएर entails।
कुनै कम खतरनाक आक्रान्त र छन् 2-3 रूपमा रोग उपस्थिति द्वारा प्रमाणित र आमा र बच्चा को स्वास्थ्य को लागि एक जोखिम खडा, गर्भावस्था को trimesters मा।
लेट गर्भावस्था मा आक्रान्त को कारण एक placental abruption पनि भुँडी मा गंभीर दुखाइ सँगसँगै छ जो छ। यो बच्चाको अवस्था एक नाटकीय गिरावट गराउँछ किनभने यो अवस्था, शल्य चिकित्सा वितरण आवश्यक छ।
साथै, गर्भावस्था को समयमा आक्रान्त placenta previa हुन सक्छ। कारण uterine पर्खाल को Thinning गर्न भास्कुलर बिच्छेद उत्पन्न र रातो उज्ज्वल छुट्टी सुरु हुन सक्छ। यस मामला मा, बच्चा ग्रस्त गर्दैन, र मेरो आमा।
क्रममा आफ्नो गर्भावस्था चिल्लो थियो भन्ने सुनिश्चित गर्न, ध्यान दिएर आफ्नो स्वास्थ्य पालना र आफ्नो नजन्मेको बच्चाको स्वास्थ्य सुरक्षित राख्न। यो एक खतरनाक लक्षण गर्भावस्था को समयमा आक्रान्त छ धेरै गम्भीर विचलन को कारण हुन सक्छ कि सम्झना, त्यसैले बन्द स्त्रीरोग विशेषज्ञ एक यात्रा राख्नु छैन।
गर्भावस्था को समयमा खण्डका चिह्न लागि तेल: समीक्षा
म गर्भावस्था को समयमा तिल गर्न सक्नुहुन्छ?
जब गर्भवती पेट मा खस्छ आशा के
गर्भवती महिलाका लागि फिटनेस। गर्भवती महिलाका लागि फिटनेस। गर्भवती महिलाका लागि फिटनेस - 1 शब्द
अल्ट्रासाउंड गर्भावस्था को5सप्ताह बनाउँछ? अमेरिकी 4, 5, गर्भावस्था को6obstetric हप्ता: के देखेको छ?
Modus - शब्द को अर्थ छ ... विभिन्न क्षेत्रहरू "modus"
Shallots - यो के हो? Shallots: बीउ देखि बढ्दै
देवदार सेप्टिक: सुविधा र लाभ
शक्ति विरुद्ध सुरक्षा 220 घरमा गर्न surges। सुरक्षाको लागि अवलोकन र स्थापना उपकरणहरू भोल्टेज surges विरुद्ध
छाती मांसपेशीमा कसरी निर्माण गर्न
विदेशी व्यापार: सुविधा र विनियमन को तरिका
कसरी घर मा प्लाईवुड मोड गर्न: चरण पुस्तिका द्वारा चरण
Mosses के हुन्? संरचना, प्रजनन, mosses, तिनीहरूको अर्थ र आवेदन
Litvinov Maksim Maksimovich, जनता Commissar: जीवनी, पुरस्कार, फोटो